Samsung Galaxy J5 (2017) na - enweta mmelite nche megide BlueBorne | Gam akporosis
Aaron Rivas | | Samsung, Nche
Ruo nwa oge ugbu a, Android dị iche iche malware emetụtala nke na-apụ apụ imebi ahụmịhe onye ọrụ anyị, na-enwe ike inye ohere na njikwa na-enweghị ikike maka ndị na-agba ọsọ na ndị ọjọọ ... Na nke a, anyị ga-ekwu maka BlueBorne, otu n'ime malware kachasị ọhụrụ na, ọ bụghị naanị na-awakpo gam akporo, kamakwa IOS, Linux, Windows na smart ngwaọrụ dị ka Smarts TV.
Samsung Galaxy J5 enwewo nsogbu n'ihi na ọ nweghị, ma ọ bụ nwere, ihe nchebe ọ bụla megide malware a ... Nke a agbanweela n'ihi mmelite ọhụrụ ewepụtara maka ọnụ a.
1 Mmelite ahụ megide BlueBorne maka Samsung Galaxy J5 (2017) dị ugbu a
2 BlueBorne: Ihe iyi egwu oge niile
2.1 Gịnị kpatara nke a?
3 BlueBorne abụghị naanị na-emetụta Android Smartphones
Mmelite ahụ megide BlueBorne maka Samsung Galaxy J5 (2017) dị ugbu a
Ọ bụrụ na ịnwebeghị emelite gị Samsung Galaxy J5 (2017), anyị na-akwado ka ị mee ya ozugbo enwere ike.
Mmelite ahụ nwere 391,88 mb na, iji lelee aka ma ọ bụrụ na anyị nwere ya, dị nnọọ gaa 'Ntọala' na n’ime 'Nwelite aka', anyị ga-enwerịrị mmelite nke ga-echebe anyị BlueBorne.
Ọ bụrụ na ị mabeghị gịnị bụ BlueBorne na otu malware a nwere ike isi metụta gị, I ruola saịtị egosipụtara. Ebe ọ bụ na Gam akporosis, anyị chọrọ ịkụziri gị ihe ọjọọ nje a nwere ike ibute, ya mere, gụọ ...
BlueBorne: Ihe iyi egwu oge niile
Na mbụ, ebe a na Gam akporosis, anyị na-ekwu maka ya BlueBorne y esi mara ma ọ bụrụ na mkpanaka gị adịghị ike.
Malụwa Achọpụtara BlueBorne site na Armis Labs, ụlọ ọrụ nchekwa kọmputa nke lekwasịrị anya na IoT (Intanet nke Ihe).
Ọzọ, anyị ga-egosi gị vidiyo nke, Islọ nyocha Armis na-egosi anyị etu o si agbasa ma kọwaa ihe egwu dị na malware a.
Na vidiyo ahụ, ọ bụ ezie na ọ dị n’asụsụ Bekee, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ Mgbasa nke BlueBorne dị mfe. Ikwesiri ka rụọ ọrụ Bluetooth na, larịị ma dị mfe, anyị ga-enweta malware n’amaghị ama.
Nke a bụ n'ihi a okwu nchekwa na Protocol Network Network Encapsulation (BNEP), nke na-enye ngwaọrụ ohere ịkekọrịta ịntanetị.
Este nche mgbochi ga-ekwe ka malware BlueBorne, gbue Koodu iji chịkwaa ọdụ anyị.
BlueBorne abụghị naanị na-emetụta Android Smartphones
Na vidiyo a, Islọ nyocha Armis ọ na-egosi anyị, na nkewa nke elu nke ihuenyo vidiyo, ihe hacker nụrụ; na nkenke ala nke ihuenyo, ihe hacker na-ahu, na, na nkenke aka nri nke ala, ihe anyi ji igwe nlere anya anyi eme.
Maka vidiyo a, ngwaọrụ ejiri mee ka ọ bụrụ Samsung Gear S3.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, BlueBorne abụghị naanị na-emetụta Android Smartphones, ma ọ bụ nye ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka Apple, Microsoft, Linux na ndị ọzọ, mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ smart niile, gụnyere, dị ka anyị pụrụ ịhụ, Samsung Gear S3.
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị nwere ọrịa BlueBorne, ihe ọ bụla ị mere, ndị na-agba ọsọ ga-ahụ ya.
Yabụ ugbu a ịmara ... Ọ bụrụ na ị nwere Smartphone Samsung Galaxy J5 (2017) ma ị nataghị mmelite ahụ na-akpaghị aka, biko mee ya ozugbo enwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Samsung Galaxy J5 (2017) na - enweta mmelite nche megide BlueBorne
Samsung na-emepụta igwe iji chọpụta Bitcoins na Galaxy S5 ochie